Sanima General Insurance LTD(Sanima General Insurance LTD) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ब्रोकर कमिसन घटाउन सेयर लगानीकर्ता संघको आग्रह , बजार अझै बढ्ने दाबी
युनाइटेड इदी मर्दीको आइपीओ आइतबार बाँडफाँड हुने, कति पर्यो आवेदन ?
Sanima General Insurance LTD
सानिमा जनरलको आईपीओ बाँडफाँड, नतिजा बिजशालामा हेर्न सकिने
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँटडआज शुक्रबार बिहान ८ः३० बाँडफाड गरेको छ । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडका सीईओ रमेन्द्र रायमाझीले अनामनगरस्थित क्यापिटलको मुख्य कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम भएको जानकारी दिएका हुन् । आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम फेसबुक लाइभबाट समेत...
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको रु. ३० करोडको आईपीओमा आजबाट आवेदन दिन सकिने
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आज बुधबारदेखि ३० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको हो। निष्कासित कुल सेयर संख्यामध्ये १ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि...
रिलायन्स लाइफ र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बोर्डमा अनुमति माग
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका छन्। दुवै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्र्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका हुन्। रिलायन्सले हाल कायम जारीपुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६३ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ। यो...
किशोर प्रधानसँग भिजन नभएको चन्द्र ढकालको टिप्पणी, 'अर्काको अजेण्डा बोकेर हिँड्नेले महासंघलाई गति दिनसक्दैन'
न्यादी हाइड्रोपावरले रु. ४०.५० करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने, बोर्डमा दियो आवेदन
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले पायो रु. ६० करोडको आईपीओ निष्कासन अनुमति
यूनाइटेड इदी मर्दीको आइपीओ आगामी साता बाँडफाँड हुने
माउन्टेन इनर्जीको आइपीओ आगामी बिहीबार बाँडफाँड हुने